ရီးယဲလ်အသင်းဟာ နည်းပြအပြောင်းအလဲလုပ်ရင် ရလဒ်ကောင်းတတ်တယ်
တစ်ရာသီအတွင်း နည်းပြအပြောင်းအလဲလုပ်ရင် ရလဒ်ကောင်းလေ့ရှိတဲ့ ရီးယဲလ်
31 Oct 2018 . 6:21 PM
ဘောလုံးရာသီ တစ်ရာသီအတွင်း နည်းပြအပြောင်းအလုပ်တာဟာ အန္တရာယ်များတယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အံ့အာသင့်စရာကောင်းအောင်ပဲ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ရာသီမကုန်ခင် နည်းပြအပြောင်းအလဲလုပ်တဲ့ အကြိမ်တော်တော်များများမှာ ရလဒ်ကောင်းလေ့ရှိတယ်။ အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် တစ်ရာသီအတွင်း နည်းပြအပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့တာက (၁၆)ကြိမ်အထိရှိပြီး အဲဒီထဲက (၈)ကြိမ်မှာ ရာသီကုန်ကျရင် ဆုဖလား အောင်မြင်မှုတွေ ရယူခဲ့ဖူးပါတယ်။ နည်းပြအပြောင်းအလဲ အများဆုံးက ၁၉၅၀-၅၁၊ ၁၉၉၀-၉၁ ရာသီတွေဖြစ်ပြီး နည်းပြ(၃)ဦးအထိ ပြောင်းလဲခဲ့ပေမယ့် ဆုဖလားအောင်မြင်မှုတော့ မရခဲ့ဘူး . . .
တစ်ရာသီအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ရီးယဲလ် နည်းပြအပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့တာက ၁၉၄၂-၄၃ ရာသီဖြစ်ပြီး Juan Armet နေရာကို Ramon Encinas နဲ့ အစားထိုးခဲ့တယ်။ ဆုဖလားအောင်မြင်မှု မရခဲ့ပေမယ့် ရလဒ်ကောင်းတွေ ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး Ramon Encinas ဟာ စပိန်ဘုရင့်ဖလား ဗိုလ်လုပွဲရောက်ရှိအောင် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။
ရီးယဲလ်အသင်းနည်းပြ လူးဝစ်ကာနစ်ဂလီယာ Luis Carniglia အဖျားဝေဒနာကြောင့် ရာထူးက နုတ်ထွက်ခဲ့လို့ ဂန္ထ၀င်ကစားသမား မီဂွယ်လ်မူနော့ဇ် Miguel Munoz ကို ရာသီဝက်မှာ ခန့်အပ်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ မှန်ကန်တဲ့ အပြောင်းအလဲဖြစ်ခဲ့ပြီး အသင်းအတွက် (၅)ကြိမ်မြောက် ဥရောပဖလား (ချန်ပီယံလိဂ်)ကို ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။
ရလဒ်ဆိုးတွေကြောင့် နည်းပြမီဂွယ်လ်မူနေ့ာဇ် Miguel Munoz ရာထူးက ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီး လူးဝစ်မိုလွန်နီ Luis Molowny ကို နည်းပြသစ်ခန့်အပ်ခဲ့တယ်။ လူးဝစ်မိုလွန်နီဟာ စပိန်ဘုရင့်ဖလားဗိုလ်လုပွဲမှာ ဘာစီလိုနာကို (၄)ဂိုးပြတ်နဲ့ အနိုင်ယူပြီး ဖလားလက်မဲ့ ရာသီမဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။
လာလီဂါ ရာသီအဖွင့်ပွဲမှာ Salamanca အသင်းကို ရှုံးပြီးပြီးချင်းမှာပဲ နည်းပြ မီလ်ယန်နစ် Miljan Miljanic ဟာ ရာထူးက ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီး နည်းပြဟောင်း မိုလွန်နီက တစ်ကျော့ပြန် ကိုင်တွယ်ခဲ့ရတယ်။ ပထမအကြိမ်တုန်းကလည်း ရီးယဲလ်ကို ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ မိုလွန်နီဟာ ဒီတစ်ခါမှာ (၁၈)ကြိမ်မြောက် လာလီဂါ ချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။
မိုလွန်နီဟာ ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် တတိယအကြိမ်မြောက် သူရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပဖလား (ချန်ပီယံလိဂ်)မှာ အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် အဆိုးရွားဆုံး ရလဒ်အဖြစ် ကိုင်ဇာစလော့တန်အသင်းကို (၅)ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာပဲ Vujadin Boskov ကို ရာထူးက ထုတ်ပယ်ခဲ့သလို မိုလွန်နီကို နည်းပြ ပြန်ခန့်အပ်ခဲ့တယ်။ မိုလွန်နီဟာ စပိန်ဘုရင့်ဖလား ရယူပြီး ရီးယဲလ်ကို ကယ်တင်ပေးခဲ့တယ်။
မိုလွန်နီဟာ နည်းပြကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် ရီးယဲလ်အသင်းကို ကာလတိုသာ ကိုင်တွယ်ခဲ့ရတာက အံ့အားသင့်စရာပါပဲ။ ဒီရာသီမှာလည်း Amancio Amaro ကို ရာထူးက ထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီး မိုလွန်နီဟာ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်အဖြစ် ရီးယဲလ်အသင်းနည်းပြထိုင်ခုံပေါ် ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြန်တယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာ အရင်ကထက် ပိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီး UEFA ဖလားနဲ့ လာလီဂါဖလားတို့ကို ရယူခဲ့တယ်။
ဂန္ထ၀င်နည်းပြအဖြစ် သတ်မှတ်ရမယ့် ဒဲလ်ဘော့စကေး Del Bosque သူရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရာသီပါ။ တိုရှက် Toshack ရဲ့နေရာ အစားဝင်လာတဲ့ ဒဲလ်ဘော့စကေးဟာ ရာသီကုန်မှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ရယူပေးခဲ့တယ်။
နည်းပြအပြောင်းအလဲ လုပ်ပြီး အကြီးအကျယ် အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ ရာသီလို့ ပြောရမယ်။ ရလဒ်ဆိုးတွေကြောင့် နည်းပြဘင်နီတက်ဇ် Rafael Benitez ကို ရာသီဝက်မှာ ထုတ်ပယ်ပြီး လူငယ်အသင်းနည်းပြ ဇီဒန်း Zidane ကို နည်းပြသစ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့တယ်။ (၅)လအကြာမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့အပြင် ဇီဒန်းဟာ (၃)နှစ်ခွဲကာလအတွင်း ချန်ပီယံလိဂ်(၃)ကြိမ်ဆက်အပါအ၀င် ဆုဖလား(၉)ခုအထိ ရယူပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီရလဒ်တွေအရ နည်းပြအပြောင်းအလဲလုပ်တိုင်း အခြေအနေဆိုးသွားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ တွေ့ရမယ်။ အခုအချိန်မှာ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ လိုပယ်တက်ဂီ Julen Lopetegui ကို ရာထူးက ထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီး လူငယ်အသင်းနည်းပြ ဆိုလာရီ Santiago Solari ကို နည်းပြသစ် ခန့်အပ်လိုက်ပါပြီ။ ရီးယဲလ်ကစားသမားဟောင်း ဆိုလာရီဟာ နောက်ထပ်ဇီဒန်းတစ်ဦး ဖြစ်လာမလား၊ ဒါမှမဟုတ် မထင်မရှားနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်သွားမလားဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ . . .
တဈရာသီအတှငျး နညျးပွအပွောငျးအလဲလုပျရငျ ရလဒျကောငျးလရှေိ့တဲ့ ရီးယဲလျ
ဘောလုံးရာသီ တဈရာသီအတှငျး နညျးပွအပွောငျးအလုပျတာဟာ အန်တရာယျမြားတယျလို့ သတျမှတျခံထားရတယျ။ ဒါပမေဲ့ အံ့အာသငျ့စရာကောငျးအောငျပဲ ရီးယဲလျအသငျးဟာ ရာသီမကုနျခငျ နညျးပွအပွောငျးအလဲလုပျတဲ့ အကွိမျတျောတျောမြားမြားမှာ ရလဒျကောငျးလရှေိ့တယျ။ အသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ တဈရာသီအတှငျး နညျးပွအပွောငျးအလဲလုပျခဲ့တာက (၁၆)ကွိမျအထိရှိပွီး အဲဒီထဲက (၈)ကွိမျမှာ ရာသီကုနျကရြငျ ဆုဖလား အောငျမွငျမှုတှေ ရယူခဲ့ဖူးပါတယျ။ နညျးပွအပွောငျးအလဲ အမြားဆုံးက ၁၉၅၀-၅၁၊ ၁၉၉၀-၉၁ ရာသီတှဖွေဈပွီး နညျးပွ(၃)ဦးအထိ ပွောငျးလဲခဲ့ပမေယျ့ ဆုဖလားအောငျမွငျမှုတော့ မရခဲ့ဘူး . . .
တဈရာသီအတှငျး ပထမဆုံးအကွိမျ ရီးယဲလျ နညျးပွအပွောငျးအလဲလုပျခဲ့တာက ၁၉၄၂-၄၃ ရာသီဖွဈပွီး Juan Armet နရောကို Ramon Encinas နဲ့ အစားထိုးခဲ့တယျ။ ဆုဖလားအောငျမွငျမှု မရခဲ့ပမေယျ့ ရလဒျကောငျးတှေ ရယူနိုငျခဲ့ပွီး Ramon Encinas ဟာ စပိနျဘုရငျ့ဖလား ဗိုလျလုပှဲရောကျရှိအောငျ ပို့ဆောငျပေးခဲ့တယျ။
ရီးယဲလျအသငျးနညျးပွ လူးဝဈကာနဈဂလီယာ Luis Carniglia အဖြားဝဒေနာကွောငျ့ ရာထူးက နုတျထှကျခဲ့လို့ ဂန်ထဝငျကစားသမား မီဂှယျလျမူနော့ဇျ Miguel Munoz ကို ရာသီဝကျမှာ ခနျ့အပျခဲ့တယျ။ ဒါဟာ မှနျကနျတဲ့ အပွောငျးအလဲဖွဈခဲ့ပွီး အသငျးအတှကျ (၅)ကွိမျမွောကျ ဥရောပဖလား (ခနျြပီယံလိဂျ)ကို ရယူနိုငျခဲ့တယျ။
ရလဒျဆိုးတှကွေောငျ့ နညျးပွမီဂှယျလျမူနေ့ာဇျ Miguel Munoz ရာထူးက ထုတျပယျခံခဲ့ရပွီး လူးဝဈမိုလှနျနီ Luis Molowny ကို နညျးပွသဈခနျ့အပျခဲ့တယျ။ လူးဝဈမိုလှနျနီဟာ စပိနျဘုရငျ့ဖလားဗိုလျလုပှဲမှာ ဘာစီလိုနာကို (၄)ဂိုးပွတျနဲ့ အနိုငျယူပွီး ဖလားလကျမဲ့ ရာသီမဖွဈအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တယျ။
လာလီဂါ ရာသီအဖှငျ့ပှဲမှာ Salamanca အသငျးကို ရှုံးပွီးပွီးခငျြးမှာပဲ နညျးပွ မီလျယနျနဈ Miljan Miljanic ဟာ ရာထူးက ထုတျပယျခံခဲ့ရပွီး နညျးပွဟောငျး မိုလှနျနီက တဈကြော့ပွနျ ကိုငျတှယျခဲ့ရတယျ။ ပထမအကွိမျတုနျးကလညျး ရီးယဲလျကို ကယျတငျခဲ့တဲ့ မိုလှနျနီဟာ ဒီတဈခါမှာ (၁၈)ကွိမျမွောကျ လာလီဂါ ခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူးပေးခဲ့ပွနျပါတယျ။
မိုလှနျနီဟာ ရီးယဲလျအသငျးအတှကျ တတိယအကွိမျမွောကျ သူရဲကောငျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဥရောပဖလား (ခနျြပီယံလိဂျ)မှာ အသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ အဆိုးရှားဆုံး ရလဒျအဖွဈ ကိုငျဇာစလော့တနျအသငျးကို (၅)ဂိုးပွတျ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး မကွာခငျမှာပဲ Vujadin Boskov ကို ရာထူးက ထုတျပယျခဲ့သလို မိုလှနျနီကို နညျးပွ ပွနျခနျ့အပျခဲ့တယျ။ မိုလှနျနီဟာ စပိနျဘုရငျ့ဖလား ရယူပွီး ရီးယဲလျကို ကယျတငျပေးခဲ့တယျ။
မိုလှနျနီဟာ နညျးပွကောငျးတဈဦးဖွဈပမေယျ့ ရီးယဲလျအသငျးကို ကာလတိုသာ ကိုငျတှယျခဲ့ရတာက အံ့အားသငျ့စရာပါပဲ။ ဒီရာသီမှာလညျး Amancio Amaro ကို ရာထူးက ထုတျပယျခဲ့ပွီး မိုလှနျနီဟာ စတုတ်ထအကွိမျမွောကျအဖွဈ ရီးယဲလျအသငျးနညျးပွထိုငျခုံပျေါ ပွနျရောကျလာခဲ့ပွနျတယျ။ ဒီတဈကွိမျမှာ အရငျကထကျ ပိုအောငျမွငျခဲ့ပွီး UEFA ဖလားနဲ့ လာလီဂါဖလားတို့ကို ရယူခဲ့တယျ။
ဂန်ထဝငျနညျးပွအဖွဈ သတျမှတျရမယျ့ ဒဲလျဘော့စကေး Del Bosque သူရဲကောငျးဖွဈခဲ့တဲ့ ရာသီပါ။ တိုရှကျ Toshack ရဲ့နရော အစားဝငျလာတဲ့ ဒဲလျဘော့စကေးဟာ ရာသီကုနျမှာ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ရယူပေးခဲ့တယျ။
နညျးပွအပွောငျးအလဲ လုပျပွီး အကွီးအကယျြ အောငျမွငျမှုရခဲ့တဲ့ ရာသီလို့ ပွောရမယျ။ ရလဒျဆိုးတှကွေောငျ့ နညျးပွဘငျနီတကျဇျ Rafael Benitez ကို ရာသီဝကျမှာ ထုတျပယျပွီး လူငယျအသငျးနညျးပွ ဇီဒနျး Zidane ကို နညျးပွသဈအဖွဈ ခနျ့အပျခဲ့တယျ။ (၅)လအကွာမှာ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ဆှတျခူးခဲ့တဲ့အပွငျ ဇီဒနျးဟာ (၃)နှဈခှဲကာလအတှငျး ခနျြပီယံလိဂျ(၃)ကွိမျဆကျအပါအဝငျ ဆုဖလား(၉)ခုအထိ ရယူပေးခဲ့ပါတယျ။
ဒီရလဒျတှအေရ နညျးပွအပွောငျးအလဲလုပျတိုငျး အခွအေနဆေိုးသှားတာ မဟုတျဘူးဆိုတာ တှရေ့မယျ။ အခုအခြိနျမှာ ရီးယဲလျအသငျးဟာ လိုပယျတကျဂီ Julen Lopetegui ကို ရာထူးက ထုတျပယျခဲ့ပွီး လူငယျအသငျးနညျးပွ ဆိုလာရီ Santiago Solari ကို နညျးပွသဈ ခနျ့အပျလိုကျပါပွီ။ ရီးယဲလျကစားသမားဟောငျး ဆိုလာရီဟာ နောကျထပျဇီဒနျးတဈဦး ဖွဈလာမလား၊ ဒါမှမဟုတျ မထငျမရှားနဲ့ပဲ အဆုံးသတျသှားမလားဆိုတာတော့ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ . . .